February 22, 2021 - Padaethar
မိန်းကလေးတွေ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးကို ခဏခဏ စိတ်ကောက်တာ ဒီအချက်လေးတွေကြောင့်ပါ
February 22, 2021 by Padaethar
မိန်းကလေးတွေ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးကို ခဏခဏ စိတ်ကောက်တာ ဒီအချက်လေးတွေကြောင့်ပါ ချစ်သူမိန်းကလေးတွေက အကြောင်းမဲ့သက်သက် စိတ်ဆိုးတာ မဟုတ်ဘူးပါနော် ၊ ဒါ‌ လေးတွေကြောင့်မို့စိတ်ဆိုးတာပါ ကိုကိုတို့ရေ။ရည်းစားတွေစိတ်ဆိုး ၊ စိတ်ကောက်ကြတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ စိတ်ကောက်ဖို့က မိန်းကလေးတာဝန် ၊ ချော့ရမှာက ကောင်လေးတွေတာဝန်ပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဒါပေမယ့် ကောင်မလေး စိတ်ဆိုးနေချိန်မှာတော့ မချော့တဲ့အပြင် `စိတ်ပဲကောက်နေတယ် ၊ အလကားနေရစ်တယ် ၊ပြဿနာရှာတယ်´ လို့ သွားပြောရင်တော့ လောင်နေတဲ့မီးကို မိန်းကလေးတွေ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးကို ခဏခဏ စိတ်ကောက်တာ ဒီအချက်လေးတွေကြောင့်ပါ လောင်စာပိုထည့်ပေးလိုက်သလိုပဲ ပိုအခြေအနေဆိုးသွားမယ်နော် ။တကယ်တော့ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဘယ်လို အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရလဲဆိုတော့ ၁။ Exအကြောင်းရှာတွေ့လို့ ။ မိန်းကလေးတွေက ဘာလောက်ပဲ ကိုယ့်ရည်းစားနောက်ကြောင်းကို ဂရုမစိုက်ဘူး … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖြတ်ချင်လာပြီဆိုရင် ယောကျာ်းတွေသုံးတတ်တဲ့ အကွက်များ…
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ….
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်၊ အဲဒါကိုလည်း ကိုယ်က သိနေတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုရင် စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကို ခံစားနေရမှာ အသေအချာပါပဲ ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်ရက်လေခြင်း၊ ကိုယ့်ကို လိမ်ရက်လေခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပွားများအောင် တွေးတောမနေဘဲ ဒါလေးတွေကို သတိရဖို့ ပြောချင်ပါတယ်နော် ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ (၁) လိမ်တဲ့သူက ကိုယ်ခံစားရတာထက် ပိုပြီး ခံစားရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ မကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့ သူဟာ တချိန်ချိန်မှာ ၀ဋ်ပြန်လည်ပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို အလွဲသုံးစား … Read more
ညနေကတွေ့လိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နိမိတ်ကောင်းတွေလာတော့မည့် နိမိတ်ပုံရိပ်
ညနကေတှလေို့ကျတဲ့ နိမိတျကောငျးတှလောတော့မညျ့ မွနျမာနိုငျငံမွပေုံ ပုံစံဖွဈနတေဲ့ မိုးတိမျ ထူးခွားပါတယျအလှနျကိုဆနျးကယျြနပေါပွီ။ဖွဈစဉျကတော့ပွောရမယျဆိုရငျ ဒီနညေ့နပေိုငျးဖွဈပျေါလာတဲ့ တိမျပုံစံပါဘဲ။ လူမှုကှနျယကျမှာတငျထားတာပါ Photo Shopမဟုတျပါ။အမှနျတကယျပုံပါနျော …. ဒီပုံကိုတော့ ညီလေးတဈယောကျက ညနခေငျးအမနေဲ့အပွငျထှကျရာမှ အမှတျမထငျမွငျတှပွေီ့းရိုကျကူးခဲ့တဲ့ပုံဖွဈပါတယျ။ ဒီပုံကိုရိုကျကူးခဲ့တာကတော့ Thet Zaw Accကဖွဈပါတယျ။နိမိတျကောငျးတှဖွေဈလာတော့မယျလို့ယူဆရတဲ့ နိမိတျထှနျးတောကျလာခဲ့ပါပွီ။ ဒါဟာတိုကျဆိုငျမှုမဖွဈနိုငျဘဲ လောကနတျတှကေ မွနျမာပွညျသူတှေ ပြျောရှငျရကာ အနာဂတျကောငျးပိုငျဆိုငျပွီး …. ပွညျသူတှအေမှနျတကယျလိုခငျြတဲ့ ခေါငျးဆောငျထှကျပျေါလာလိမျ့ပါမယျလို့ယူဆရပါတယျ။ဒီပုံလေးကတော့ ရနျကုနျမွို့မှာဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။Credit Zawgyi ညနေကတွေ့လိုက်တဲ့ နိမိတ်ကောင်းတွေလာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ မိုးတိမ် ထူးခြားပါတယ်…..အလွန်ကိုဆန်းကျယ်နေပါပြီ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ညနေပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိမ်ပုံစံပါဘဲ။ လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ထားတာပါ Photo Shopမဟုတ်ပါ။အမှန်တကယ်ပုံပါနော် …. ဒီပုံကိုတော့ ညီလေးတစ်ယောက်က ညနေခင်းအမေနဲ့အပြင်ထွက်ရာမှ အမှတ်မထင်မြင်တွေ့ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တာကတော့ Thet Zaw Accကဖြစ်ပါတယ်။နိမိတ်ကောင်းတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့ယူဆရတဲ့ နိမိတ်ထွန်းတောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘဲ လောကနတ်တွေက မြန်မာပြည်သူတွေ … Read more
သင့်အနာဂတ်ကိုပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ
အချို့ချစ်သူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ချစ်သူရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကို ပုံဖော်ခွင့်မပေးတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ချစ်သူမိန်းကလေးကျတော့လည်း ချစ်သူအပေါ်မှာ နားလည်မှုတွေ ရှိပြီး အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်အဖော်ရမှာလည်း အားပေးအားမြှောက်ပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသား ပရိသတ်ကြီးအတွက် အနာဂတ်ကို ပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အနှောက်အယှက်မပေးဘူး ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ စာရေးတာ ၀ါသနာပါသူတစ်ယောက် ဆိုပါတော့။ သင်စာရေးနေရင် အခြား ဆူညံသံပြုနေတယ်ဆိုရင်တောင် အလိုက်တသိ ရပ်ပေးလိုက်တယ်၊သင် စိတ်အာရုံစုစည်းမှုကို ပျက်ပြားစေမယ့် အရာတွေ မလုပ်ဘူး။ သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါတယ်ဆိုရင်လည်း သင် ဂစ်တာတီးလုံး စမ်းနေချိန်၊ Note ရေးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လည်း ဒီသဘောပါဘဲ။ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး ကော်ဖီရေ အဆင်သင့်ချပေးတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူကို ရထားတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ (၂) လိုအပ်ရင် အားသွန်ခွန်စိုက် … Read more
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ယောကျာင်္းလေးတွေအတွက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့  အာရုံစိုက်မှု၊သဘောကျမှု တို့ကို ရယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ပြောပြပါမယ်။ ဒါဟာ မိန်းကလေး ဘက်က မသိအောင် ဖုန်းနံပါတ်ကို Hack လုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်မသိတဲ့ သူ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို သူ့ရှေ့မှာ “ဟုတ်တယ်မလား” ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ မျက်လှည့်ပြတဲ့ သဘောပါ။ အထာတော့ ကျပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဒီနည်းလမ်းကို အမေရိကန် နိုင်ငံက တီထွင်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကနီဦး GSM ဖုန်းများ(၀၉၅xxxxxx) မှာသာ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ နည်းလမ်းလေးကတော့ – အဆင့် ၁ ။ သင်ဟာ ဂဏန်းပေါင်းစက် တစ်ခုတည်းကို သုံးပြီး သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကောင်မလေးကို ပြောပြလိုက်ပါ။ အဆင့် ၂ ။ … Read more
၁။ အပေါစားအ၀တ်အစားတွေဝယ်တာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ လူငယ်ဘာသာသဘာဝ ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အမီ သင်ဟာ ပေါ်ပင်ဖက်ရှင်တွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ပေါ်ပင်တွေနောက်ကိုမလိုက်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အများလေးစားခံရပြီး စတိုင်ကျတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကိုယ်ဝတ်ဆင်မယ့် အ၀တ်အစားတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိုစတင်လိုက်ပါတော့။ တစ်လနှစ်ခါလောက် အ၀တ်အစားအသစ်တွေဝယ်ဝတ်နေမယ့်အစား အဲဒီပိုက်ဆံတွေကိုစုပြီး နှစ်လတစ်ခါလောက်မှဝယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး သင့်ကို စတိုင်ကျစေမယ့် အ၀တ်အစားမျိုးဝယ်ပါ။ ၂။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ချစ်သူကို လက်တွဲဖြုတ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့သူဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အကုန်မခံပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆီကဘယ်လိုအချက်တွေလိုချင်လဲဆိုတာ ချရေးပါ။ အဲဒါ သင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူပါပဲ။ အသက်အရွယ်ရလာလို့ မရှိရှိတဲ့လူကိုကြိတ်မှိတ်တွဲတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်မပျော်ရွှင်မှန်း သိရက်နဲ့ အတင်းရှေ့မတိုးပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုမပျော်ရွှင်စေတဲ့လူနဲ့ အတူရှိနေမယ့်အစား Single ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ဖြတ်သန်းကြည့်စမ်းပါ။ ၃။ လူတွေရဲ့ အထင်အမြင်တွေကို အရမ်းဂရုစိုက်လွန်းနေတာကို ရပ်တန်းကရပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုလူတွေဘယ်လိုထင်မြင်မလဲဆိုတာကို ဂရုစိုက်တတ်တာ … Read more